मोबाइल लिएर सुत्ने बानी छ ? सावधान ! अनुसन्धानकर्ताले दिए यस्तो चेतावनी - Ratopati
मोबाइल लिएर सुत्ने बानी छ ? सावधान ! अनुसन्धानकर्ताले दिए यस्तो चेतावनी
कार्तिक ८ | इन्डियन एक्सप्रेस
स्मार्टफोन हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । जुनसुकै बेला पनि हाम्रो साथमा रहने स्मार्टफोन हाम्रो लागि खतरनाक भएको खबर हामीले यसअघि पनि पढिसकेका छौं तर एक ताजा अनुसन्धानले फोनलाई राती सँगै लिएर सुत्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।